Isitudiyo sale mihla esicocekileyo kufutshane nesikhululo sikaloliwe saseStudenches - I-Airbnb
Isitudiyo sale mihla esicocekileyo kufutshane nesikhululo sikaloliwe saseStudenches
Iflethi okanye indlu ekwicomplex etofotofo yale mihla - istudiyo esinayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi. Ime kumgangatho wesithathu kwisakhiwo esinemigangatho eyi-10 kwindawo yokuhlala yaseGorsky. Indawo efanelekileyo yokufikelela ngokukhawuleza naphi na esixekweni. Iflethi okanye indlu ekwicomplex isandul 'ukulungiswa ibe inazo zonke izinto ezenza iindwendwe zihlale kamnandi kwikomkhulu laseSiberia.
Iflethi inazo zonke izinto ukuze kuhlalwe kamnandi:
- iketile yombane,
- isitovu sombane esine-hob ne-hood,
- isihluzi samanzi,
- iseti yezitya zokupheka,
- iseti yezitya kunye nezinto zokutya,
- isixhobo sokomisa iinwele,
- iayini, ibhodi yokuayinela,
- umatshini wokuhlamba impahla,
- i-TV ene-cable TV,
- i-intanethi ye-Wi-Fi,
- ilineni yebhedi ecocekileyo,
- iseti yeetawuli yondwendwe ngalunye,
- Izinto zococeko (isepha, ishampu, i-shower gel, i-t/iphepha, izinto zokosula)
Siyakuvuyela nokukunika iti, ikofu, iswekile kunye nokunconywa!
Ibhedi yabantu abayi-2 ilungiswe ngendlela yebhedi eyisofa. Ungafaka ibhedi eyongezelelekileyo (i-rollaway) xa ucelile.
Siza kuyiqwalasela iminqweno yakho!
Indawo efanelekileyo yokufikelela ngokukhawuleza naphi na esixekweni. Umgama wokuhamba ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseStudencheskaya (imizuzu eyi-10) kunye neKarl Marx square (imizuzu eyi-20). Kukho indawo yokumisa uloliwe, ibhasi kunye nesikhululo setram kwimizuzu eyi-3 ukuya kweyi-5 xa uhamba ngeenyawo. Kukho amaziko amaninzi onyango kufutshane - iNovosibirsk Regional Hospital, iFederal Centre for Impersurgery, iPassmanwagen, uProfesa Khachatryanwagen, Iziko Lezonyango Elitsha. Ikliniki karhulumente "iMicrosurgery of the eye" ikude ngemizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20. Kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo kumaziko emfundo ephakamileyo eNSTU naseSibUPK, isikolo, iAurora cinema, ulwandle lwesixeko. Amaziko okuthenga iVersailles neSuncity akude ngemizuzu eyi-10 ngemoto. Imizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20 ngemoto ukuya kwi-Expocenter, eAuchan, eIkea, eAquapark.
Ifumaneka ukususela ngo-8 kusasa ukuya ngo-11 ebusuku ixesha le-Novosibirsk (+4 ukuya eMoscow). Ndazise ukuba unemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.